Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada HRW oo Taliska Wayaanaha Cambaaraysay.
Hay’ada HRW oo Taliska Wayaanaha Cambaaraysay.
Posted by Dulmane	/ January 20, 2018
Warbixin sanadeedkii hay’ada Human Rights Warch ee sanadkii tagay ee 2017 ayaa siwayn loogu cambaareeyay xukuumada wayaanaha ee xasuuqa baahsan ugaysatay shucuubta kala duwan ee ay gumaystaan.
Warbixinta ayaa lagu xusay in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay dadka shacabka ah ugaysteen tacadiyo isugu jira dil, jidh dil, kufsi dhac iyo xidhay aan horaan loogu arag taariikhda Itoobiya oo sida lasheegay sanadkan dhacay.
Warbixinta ayaa lagu xusay in gabi ahaanba wadanka Itoobiya aysan kajirin xoriyada hadalka, xoriyada saxaafada iyo xoriyada ganacsiga, waxaana lasheegay in ay xoriyad la’aanta wadanku gaadhay meeshii ugu liidatay abid.
Hay’ada ayaa warbixinteeda kusheegtay in xiligii xukunka dag daga ah uu kajiray wadanka Itoobiya ay shacabka soo gaadhay dhibka ugu badan, waxaana warbixinta lagu xusay in uu wali wadanka kajiro xukunkii qalafsanaa.
Hay’ada Human Right Watch ayaa xukuumada wayaanaha kacodsatay in ay joojiso gabood falada aan geed loogusoo gabanin ee ay kuhayaan shacabka aan is difaaci karin, sidoo kale hay’ada ayaa taliska wayaanaha kacodsatay in xuquuqda aadamaha ay ilaaliyaan.
Ugu dambayn hay’ada ayaa sheegtay in hadii xukuumada wayaanuhu ay kadhago adaygto codsigooda in lala xisaabtami doono maalin maalmaha kamid ah.